အောင်မြင်ကြီးပွားရေးဖော်မြူလာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အောင်မြင်ကြီးပွားရေးဖော်မြူလာ
Posted by etone on Jul 6, 2010 in News |0comments
ဆရာဖေမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ ဘ၀အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာစာစုများမှ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူ (သို့မဟုတ်) သစ္စာ.သမာဓိ.သတ္တိရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အောင်မြင်ကြီးပွားရေးဖော်မြူလာစာစုလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ကောက်နုတ်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.
…ဆရာ့ရဲ့စာတွေကို ဖတ်ရတာဟာ အားအင်သစ်.ခွန်အားသစ်တွေနဲ့ စိတ်ဓါတ် တက်ကြွရွှင်လန်းမှုကိုရရှိစေပါတယ်. နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ နေကြတဲ့ဘ၀ကို ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ .ရှိရမယ့်အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု.သစ္စာ.သမာဓိ.သတ္တိရှိမှုဆိုတာတွေကို ကျွန်မတို့ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းကြမလဲဆိုတာ
…လူတစ်ယောက်အရည်အသွေးမြင့်တယ်ဆိုတာ ဥာဏ်ထက်မြက်တာလား. ၀ီရိယကောင်းတာလား. ပညာရပ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် တာလား. ဒါတွေကလည်း အရည်အသွေးကောင်းတွေ ဖြစ်တာမှန်ပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ဒီအရည်အသွေးတွေက တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိသာ တိုးတက်စေပါမည်. ထိပ်ဆုံးအဆင့်အထိ တက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး. အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန် တာဝန်ကိုယုံကြည်အပ်နှင်းခြင်း ခံရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရန်အတွက်မူ ထူးခြားသောအရည်အသွေး. Integrity ရှိရပေမည်။ Integrity ဟူသည် အလျော့အပျက်မရှိ. အလုံးစုံတည်ရှိမှု (Wholeness)ဟူ၍ ဆိုရပါမည်.
*** မိမိဘာသာပြည့်စုံညီညွတ်သောသူ. တစ်ယောက်တည်းကွဲပြားပိုင်းခြား မနေသူ.
…ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူ.စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်ပြည့်ဝသူ.အဂတိလေးပါး မလိုက်စားသူ.သစ္စာ.သမာဓိ.သတ္တိရှိသူကို Integrity ရှိသောသူဟူ၍ မှတ်ယူ နိုင်ပါသည်. ထိုသူမျိုးသည် တစ်ခုကိုတွေးပြီး တစ်ခုကိုမပြော.မုသားစကားကို သူမဆို. တစ်ခုကို ယုံကြည်ထားပြီးနောက်တစ်ခုကို သူမလုပ်. သူသည်မိမိမူဝါဒ များနှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွှဲနေတတ်သူမျိုးမဟုတ်. ယင်းသို့ အတွင်းပဋိပက္ခများ ကင်းစင်နေခြင်းကြောင့်ပင် သူ၏မူလစွမ်းအားတွေသည် ပို၍ရှင်းလင်းကြည်လင်လာသည်.
ထိုအခါသူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သမျှသည်လည်း ထမြောက် အောင်မြင်လာရသည်.
(၁) မိမိဂုဏ်သိက္ခာကို အမြင့်မားဆုံးအဆင့်၌ ထိန်းထားခြင်း…
…နာမည်ကျော် အမေရိကန် စာရေးဆရာကြီးမတ်တွိန်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုလုပ်ရာမှ ရှိသမျှဥစ္စာဆုံးရှုံးပြီး ကြွေးတစ်ပုံဖြင့် ကျန်ရစ်လေသည်. အလုပ် ကြိုးစားလုပ်၍ ကြွေးဆပ်သော်လည်း သုံးနှစ်ကြာသည့်အထိ ကြွေးမကြေနိုင်. သူသည် တိုင်းပြည်က လေးစားကြည်ညိုသော. စာဖတ်သူတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်သော စာရေးဆရာဖြစ်၍ သတင်းစာတစ်စောင်က ဦးဆောင်ပြီး ရန်ပုံငွေ အများအပြားကောက်ခံပေးခဲ့သည်. ၄င်းရန်ပုံငွေကို လက်ခံပါက ကြွေးဝန်ထုတ်ကြီး ပေါ့သွားမည်. သို့သော်မတ်တွိန်းသည် စေတနာရှင်တို့၏ ကူညီငွေအားလုံးကို ငြင်းပယ်ပြီး (၇)လမျှအကြာတွင် သူ၏စာအုပ်သစ်တစ်အုပ် အရောင်းစွံသွားသဖြင့် ကြွေးမြီအားလုံးကို ပေးဆပ်နိုင်ခဲ့ပေသည်. မတ်တွိန်း ကား သူတစ်ပါးဝိုင်းဝန်းကယ်တင်ခြင်းခံရသူအဖြစ်သို့ အရောက်မခံဘဲ မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို အမြင့်မားဆုံးအဆင့်၌ ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်.
(၂) မိမိ၏ အရည်အသွေးအဆင့်အတန်းကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်၌ ထိန်းထားနိုင်ခြင်း…
…ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူတို့သည် ရိုးဂုဏ်ကို တန်ဖိုးထားသည်. သို့သော် ရိုးသားရုံသက်သက်ဖြင့်ပြီးသည်ဟုမယူဆ. မိမိကိုယ်ကို လေးစားဖို့. တန်ဖိုးထားဖို့. မိမိ၏အရည်အသွေးအဆင့်အတန်းကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ ထိန်းထားနိုင်ဖို့. အထူးအာရုံစိုက်သည်. ရိုးသားမှုနှင့်တွဲကာ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ တန်ဖိုးထားကြခြင်းဖြစ်သည်.အမေရိကန်ဗိသုကာသိပ္ပံ၌ ဗိသုကာဆရာကြီး ဖရန့်လွိုက်ရိုက်က တည်ကြည်ခိုင်ခန့်တဲ့. ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေး တစ်သမတ်တည်း ပေးနိုင်တဲ့သူဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လူဘဲလို့ ပြောကြားခဲ့တယ်.
(၃) အမှန်အမှားခွဲခြားတတ်သည့်ဥာဏ်နှင့် အမှန်ဖက်မှရပ်သည့် အသိ စိတ်ဓါတ်ရှိခြင်း…
…ခရစ်ယန်သာသနာသမိုင်း၌ အထင်ရှားဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားဖြစ်သူ မာတင်လူသာသည် သေဒဏ်စီရင်ခံရမည့်အချိန်အထိ သူ့ရန်သူများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်လျက် သူကိုင်စွဲဖြန့်ချီခဲ့သည့် သူယုံကြည်သော ဘာသာရေးအယူအဆ များကို လုံးဝရုပ်သိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြတ်သားစွာဆိုခဲ့သည်.
…အမှန်တရားကို သိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ် တစ်ခုဟာ ကျက်သရေမရှိဘူး. လုံခြုံမှုလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး. ကျွန်တော့် ရပ်တည်ချက်ဟာ ဒီအတိုင်းပါဘဲ. ဒီအပြင်ဘာမှ ကျွန်တောမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး. ဘုရားသခင် ကျွန်တော်မျိုးအား စောင့်ရှောက်တော်မူပါဟူ၍…
(၄) ယုံကြည်ချက်နောက်မှာ သတ္တိပါခြင်း…
…မိမိယုံကြည်သည့်အရာကို အခိုင်အမာဆုတ်ကိုင်နိုင်ရန် သတ္တိလိုကြောင်း မာတင်လူသာ ဥပမာဖြင့် သိနိုင်ပါသည်. သတ္တိဟူသည် မာတင်လူသာလောက် ကြီးကျယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးမှာသာ ရှိနိုင်သည်မဟုတ်. တကယ်ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်သူမှန်လျှင် လိုအပ်သည့်နေရာ၌ တစ်ယောက်တည်းရပ်ဝံ့စမြဲ. အမှားမြင်လျှင် ထောက်ပြ၀ံ့စမြဲပင်ဖြစ်သည်။
(၅) ဘယ်သူမှအတင်း ခိုင်းစေမှုမပြုနိုင်သောအရာကို နာခံရွက်ဆောင်ခြင်း…
…ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သောသူသည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှ အတင်းတိုက်တွန်း စေခိုင်း၍ မရနိုင်သည့်အရာတွေကို မိမိသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်. မိမိအသိ စိတ်ဓါတ်ဖြင့် မိမိဘာသာလိုက်နာသွားစမြဲဖြစ်သည်. ဥပမာပြရလျှင်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အမေရိကန်ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ယောက် သေဘေးမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပါလျက် ၄င်း၏ဆာဂျင်နှင့်အတူ အသေခံ၍ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် ရဲဘောရဲဘက်စိတ်. သေအတူရှင်မကွာ စိတ်ဓါတ်မျိုးပင်တည်း.
…ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုနှင့် ဒွန်တွဲကာ ရဲဝံ့ပြတ်သားမှုလည်း ရှိလာစမြဲပင်. အခွင့်အလမ်းရှိသည့်အရာအတွက် စွန့်စားအားထုတ်ရဲလာသည်. မိမိ အရည်အသွေးကို အားစမ်းစိန်ခေါ်လာသည့်အရာများအား ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ရဲလာသည်. မိမိအတွက် တိုးတက်မှုရှိစေမည် အတွေ့အကြုံသစ်ကို ရွှေးချယ် ရဲလာသည်.ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ်. ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကို ယုံကြည်စိတ်များ အမြဲပြည့်ဝနေပေသည်.
…မယိမ်းမယိုင်သော စိတ်ထားနှင့် ရဲဝံ့ပြတ်သားသောစိတ်များကြောင့်ပင် မိမိ ရွှေးချယ်ပြီးသည့်အရာကို မဆုတ်မနစ် လုပ်တတ်လာခြင်းဖြစ်သည်. ဦးတည် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချထားပြီး ယင်းရည်မှန်းချက်ထမြောက်အောင်မြင်ရေး အတွက် တစ်ချောင်းတည်းသောစိတ်ဖြင့် ကျားကုတ်ကျားခဲ လုပ်ကိုင်မည်.
…ဘယ်တော့မှ လက်မမြောက်နောက်မဆုတ်နဲ့တဲ့. ၀င်စတန်ချာချီက ဆိုခဲ့သည်. *ဘယ်တော့.ဘယ်တော့.ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်နဲ့*. ဧရာမ ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်စေ.သေးသေးမွှားမွှားအလုပ်ဖြစ်စေ. ဂုဏ်သိက္ခာရှိ. ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုလည်းရှိတဲ့ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတွက်ကလွှဲလို့ ဘယ်အရာအတွက်မှ အလျော့မပေးနဲ့. သူကိုယ်တိုင်လည်း သူ့စကားအတိုင်း *လက်မမြောက်နောက်မဆုတ်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်*.
…ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကြည်လင်အေးချမ်း၍ တုန်လှုပ် ခြင်းကင်းမဲ့တတ်ကြသည်. သူတို့သည် သမာဓိအားကောင်းသူများဖြစ်ရာ အလုပ်အကိုင် အကြံအစည်၌ အနှောက်အယှက် အဟန့်အတားသာမက မတရား ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျှင်ပင် ဣနြေ္ဒမပျက် ရှိတတ်ကြသည်.
…ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု.သစ္စာ.သမာဓိ.သတ္တိရှိမှုတို့ကို နေ့ချင်း.ညချင်း လွယ်လင့်တစ်ကူတော့ရမလာနိုင်ပါ. တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ယူရပါမည်.
…အသေးအမွှားဟုထင်ရသည့်ကိစ္စများများမှ စတင်ကာ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို တကယ်အလေးအနက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပါက ယင်း၏စွမ်းအားအရှိန်အ၀ါတွေကို သင်တွေ့ထိမိပြီး ထိုစွမ်းအားကပင် သင့်အား တည်ကြည်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဆွဲဆောင်ခေါ်ငင်သွားလိမ့်မည်. လောက၌ တန်ဖိုးထားအပ်.ရယူပိုင်ဆိုင်အပ်သော အရာတိုင်းလိုပင် အကျိုးအပေါက်.အလျော့မပျက် မခံတတ်သည့်သဘောသဘာဝ ရှိကြကြောင်း သင်သိမြင်လာပေမည်.
…အောင်မြင်မှုဆိုသည်ကို ဘယ်သူတွေ ဘာပေတံတွေနဲ့ပဲ တိုင်းတာကြပါစေ. အကယ်၍ သင်သာ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်အောင် အားထုတ်မည်. သစ္စာ.သမာဓိ.သတ္တိရှိသူတစ်ဦးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နိုင်မည်ဆိုပါက မုချမသွေ အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သင်ဖြစ်ရပေမည်. ဒါဟာလုံးဝ မလွဲချော်နိုင်သည့် အောင်မြင်ကြီးပွားရေးဖော်မြူလာဘဲဖြစ်ပါသည်.
Original Link: http://newworldnanda.ning.com/profiles/blogs/3451740:BlogPost:24952